Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » Imiklomelo yokuqala ye-K-Pop yase-Indonesia Manje Ukusakaza bukhoma
I-Tokopedia, inkampani yezobuchwepheshe enemakethe e-Indonesia, imemezele ukuhlelwa kwamaqembu e-South Korea ayi-10 emhlabeni jikelele okusakazwa bukhoma kwe-WIB: Indonesia K-Pop Awards ngomhlaka-25 Novemba 2021.
Lawa maqembu ayi-10 yi-BTS ne-BLACKPINK, amanxusa amabili omkhiqizo we-Tokopedia, kanye KABILI, NCT Dream, The Boyz, Stray Kids, ITZY, Treasure, Secret Number, kanye ne-Aespa.
I-WIB: I-Indonesia K-Pop Awards umcimbi wokuklomelisa ovela emiphakathini yase-Indonesia wamaqembu adumile omhlaba okukhulunywe ngawo ngenhla abalandeli bawo abavote nge-Tokopedia. I-WIB Indonesia K-pop Awards 2021 kuzoba umbukiso wokuqala wemiklomelo onikezelwe kubalandeli be-K-pop e-Indonesia, futhi izokwethula amakhonsathi ahlukahlukene avela emaqenjini.
Imiphakathi yomhlaba wonke ingasakaza i-WIB: I-Indonesia K-Pop Awards ngomhlaka-25 Novemba kusukela ngo-19.00 kuya ku-21.00 Isikhathi sase-Jakarta (UTC+7) nge-Tokopedia Play ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwe-Tokopedia kanye nesiteshi esisemthethweni se-YouTube sika-Tokopedia. Abalandeli bangabuka uhlelo ngesixhumanisi esilandelayo futhi bakhuthazwa ukuthi bahlele izikhumbuzi ukuze bangaphuthelwa wumdlalo wokuqala.
Ukuzibandakanya kwamaqembu ahlukahlukene adumile emhlabeni wonke aseNingizimu Korea emikhankasweni yangaphambilini ye-Tokopedia Shopping Time yase-Indonesia (Waktu Indonesia Belanja noma i-WIB) kwanconywa kakhulu, kwaqala izingxoxo ezinkundleni zokuxhumana zaze zaba phezulu ezihlokweni ezithrendayo emhlabeni wonke.
Umkhankaso we-WIB we-Tokopedia wenziwa njalo ngomhlaka-25 kuya ekupheleni kwenyanga ngayinye. Abantu base-Indonesia bangathola imikhiqizo ehlukahlukene eneminikelo ehlukahlukene ekhangayo ukuze benze ukuthenga kusebenze kahle.